Fanomezan'Andriamanitra ny vady (tohiny) – FJKM Ambavahadimitafo Fanomezan'Andriamanitra ny vady (tohiny) |
Fanomezan'Andriamanitra ny vady (tohiny)
Fanomezan’Andriamanitra ny vady (tohiny)
Lahy sy vavy no namoronany azy (GENESISY 1,27)
Ity teny ity dia mahagaga. Ambarany fa efa tao amin’ny tetikasan’Andriamanitra hatramin’ny voalohany mihitsy ny hanorina fanambadiana eo amin’ny olona noforoniny.
Fanomezana nomen’Andriamanitra ho an’ny olombelona hatreo amin’ny segondra voalohany ny fisian’ny vady. Tsy izany ihany fa aseho eto koa ny mahasamihafa ny mpivady : Lahy sy Vavy.
Tsy mitovy mihitsy izy ireo. Ary mivandravandra izany na eo amin’ny toe-batana fotsiny aza. Fa na ny toe-tsaina sy ny fanabeazana noraisina aza, dia samihafa matetika.
Ny fahasamihafana ary, dia zavatra voajanahary eo amin’ny mpivady. Ary raha nataon’Andriamanitra izany dia satria tsara mba hisian’ny fifamenoana sy ny fifanampiana eo amin’ny mpivady.
Tsy hisy amin’ny mpivady hihevi-tena ho manana ny feno fa hotsarovana hatrany kosa fa mila ny vadiny izy vao feno.
Fampieritreretana : Ahoana no hampivelatra ny mahaizy azy ny tsirairay ao anaty firindrana, ao anaty tokantrano ? Izay vady sahaza… (GENESISY 2,30)
Fanomezan’Andriamanitra ny vady ary fanomezana « sahaza« . Tsara Andriamanitra ka tsy afaka hanome zavatra ratsy. Ny hoe vady dia « mpanampy » ny heviny eto.
Tsy mpanampy toy ny « mpiasa » na « andevo » anefa fa ho « mpanjakavavy ». Fa raha noforonina araka ny endrik’Andriamanitra ny lehilahy, dia araka ny endrik’Andriamanitra koa ny vehivavy (Genesisy 1,27).
Ny hoe « sahaza » kosa dia azo adika hoe « llay mifanatrika aminy« ; mitovy aminy, mifanaraka aminy, namana hifandraisany. Koa tsy azo adinoana fa ny vady nomen’Andriamanitra anao dia tsy ambany kokoa noho ianao ka azonao ambaniana, na ambony kokoa noho ianao ka tompoinao tsy misy fetra. Olona mitovy aminao, endrik’Andriamanitra, mendrika hohajaina sy hotiavina feno Izy. Ary ny fanajana ny fanomezan’ny olona iray dia porofoin’ny fiainan’ilay Mpanome.
Fampieritreretana : Manaja an’Andriamanitra ve aho amin’izao fitondrako ny vadiko izao…?
Tsy hita izay vady sahaza… (GENESISY 2,30) Fanomezan’Andriamanitra ny vady fa tsy haitraitrantsika akory.
Ny tantara voalazan’ny Genesisy 2,19-20 dia mampianatra antsika fa na dia navela hitady vady aza Adama, dia tsy nahita akory. Toy ny milaza io fa raha mitady vady tsy miaraka amin’Andriamanitra isika dia miafara amin’ny « habibiana ». Izay omen’Andriamanitra antsika ihany no tena vady sahaza ho antsika. Omen’Andriamanitra fahefana hitady vady isika. Azontsika atao tokoa izany, saingy ny hahita tena vady hahatsara antsika dia tsy haintsika irery izany.
Koa rehefa nahazo vady isika dia ho fantatsika fa nanao zava-mahagaga teo amin’ny fiainantsika Andriamanitra. Niditra an-tsehatra Izy, ary nandray an-tanana ny fanolorana vady ho antsika.
Fampieritreretana : Koa raha tsy mahafa-po anao ny vadinao satria heverinao fa tsy niarahanao nifidy tamin’Andriamanitra, inona no hataonao : Hanary azy sa hihavana marina amin’Andriamanitra mba hitsaboany ny tokantranonao?
Nalaina avy amin’ny « Ny Tsiambaratelon’ny Tokantrano sambatra »